သူများနဲ့ညားတဲ့ ငါရည်းစား – Grab Love Story
ကျေးရွာဓလေ့ပျော်မွေ့စရာအလွန်ကောင်းတယ်။ ကျုပ်နာမည်ကလင်းထင်ပါ ရွာအခေါ်အဝေါ်ကတော့ ငလင်းပေါ့။ ကျုပ်မှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူး ညီမတစ်ဝမ်းကွဲ လေးတစ်ယောက်ပဲရှိတာ။ ကျုပ်မိဘတွေနဲ့ ကျုပ်ညီမဝမ်းကွဲလေးမိဘတွေက ခရီးသွားရင်းကားမှောက်ပြီး ဆုံး ပါးသွားကြတယ်ဗျာ။ ကျုပ်မှာငယ်ငယ်ကလေးတည်းက မိခြူးလေးရဲ့အဖေဆိုလည်းကျုပ် အမေဆိုလည်းကျုပ် ပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်ကတော့ ရွာမှာသူများခိုင်းရာအလုပ်ကို လုပ်နေရတဲ့သူပေါ့။ ကျုပ်ကကျောင်းမနေဘူး ဒါပေမယ့် ညီမလေးကိုတော့ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တာ။ အဲဒီ တော့မိဘတွေပိုင်တဲ့ လယ်ငါးဧကကို မောင်နှမနှစ် ယောက်လုပ်ကိုင်ရင်းစီးပွားရှာရတာပေါ့။ သီးနှံအထွက် တိုးတဲ့နှစ်တွေဆိုပျော်ရတာပေါ့ဗျာ မဟုတ်ရင် ကျုပ်မှာ ကြိုးစားရတယ်ပိုပြီးတော့လေ။ ဒီလိုနဲ့နေလာခဲ့ကြတာ ညီမလေးလည်းဆယ်တန်းအောင်လို့ မြို့ကိုကျောင်းသွား တက်ရတော့ကျုပ်မှာ နှစ်ဆကြိုးစားရတော့တာပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်တို့ရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးဦးကြီးရဲ့ သမီးတော်ကို ကျုပ်စွဲလမ်းမိပါလေရော။ သူ့နာမည်က မေနှင်း တဲ့။ ကျုပ်မှာ မရမကလိုက်ရင်း ကာလကြာတော့ သူမဆီကနေ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုရပါလေရော။ ချစ်သူဖြစ်ခါ စတော့ မိုးမမြင်လေမမြင်ပဲပျော်လိုက်ရတာလေ။ ကျုပ်က သိက်ကောင်းတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ ရွာမှာတိတ်တိတ် ပုန်း ဖာခေါင်းလိုဖြစ်နေတာ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကျုပ်ရေထမ်းပေးရတဲ့အိမ်၊ ထင်းရှာပေးရတဲ့အိမ်တွေ၊ အခြားအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အိမ်တွေတချို့မှာ ကျုပ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတစ်ချို့ကိုပြောပြမယ်ဗျ။ ကျုပ်စစချင်း လူပျိုပေါက်အရွယ်မှာ မခင်ကြည်ဆိုတဲ့အိအ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးနဲ့စဖြစ်တယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုစဖြစ်လည်း ဆိုတော့ တစ်နေ့ ကျုပ်လည်းရွာထဲမှာ အလုပ်ကလေးရလိုရငြား လမ်းလျှောက်ရင်း မခင်ကြည်တို့အိမ်ရှေ့ရောက်ရော မခင်ကြည်ကလှမ်းခေါ်တယ်ဗျ။ ကျုပ်လည်း သွားတာပေါ့။ မခင်ကြည်ပုံစံပြောရမယ်ဆိုရင် ခါးသေးသေး ရင်ချီချီ ဖင်လုံးလုံးနဲ့အိမ်ထောင်သည် တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့်သူ့အမျိုးသားကိုဖိုးခင်ကတော့ အရက်သမားတစ်ယောက် မိန်းမကိုလိုးဖို့ရယ် ကလေးယူဖို့ရယ် ကိုပဲ ဂရုစိုက်တဲ့သူမျိုးကိုးဗျ။ အဲဒီတော့ သူပြီးရင် ပြီးတာ ပဲဆိုတဲ့သူမျိုးပဲလေ လီးကလည်း ငါးလက်မသာသာ လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ နောက်မှမခင်ကြည်ပြောလို့သိရတာ။ ထားပါဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် မခင်ကြည်ခေါ်လို့ သွားတော့ သူကရေထမ်းခိုင်းတယ်လေ။ ကျုပ်လည်း အကျီတွေချွတ်ပြီးရေထမ်းပေးတါပေါ့။ အလုပ်ကြမ်းသမား ဆိုတော့ဘော်ဒီတောင့်တောင့်ကြီးကိုး။ မခင်ကြည်က ကျုပ်ကိုသေချာကြည့်နေတယ်ဗျာ။ သိပ်တော့မထူးဆန်း ပါဘူးရွာထဲမှာ ကျုပ်ကအဲလိုတွေလိုက်လုပ်ပေးနေရတာကိုး။ ကျုပ်လည်းနောက်ဆုံးတစ်ထမ်း ထမ်းပြီးတဲ့အချိန် မောတာနဲ့ ပုဆိုးနဲ့ယပ်ခပ်နေတာ မခင်ကြည် ကြည့်နေတာ ကိုသတိမထားမိဘူးလေ အောက်ခံမဝတ်တတ်တော့ အောက်က ရှစ်လက်မနီးပါးရှည်ပြီးတုတ်တဲ့လီးကိုကြည့် ပြီးမခင်ကြည်မှာမရိုးမယွဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျုပ်ကသတိ ကိုမထားမိဘူး ခဏကြာတော့ မခင်ကြည်က....
ငလင်းရေ မမကိုတစ်ခုကူညီပါဦး ကြောင်အိမ်ပေါ်က. ဗူးလေးယူပေးပါလားတဲ့။
ကျုပ်ကလည်း ဟုတ်မမ ကျွန်တော်လာပြီဆိုပြီး အိမ်ပေါ်တက်ယူပေးတယ်။
ကျုပ်ကြောင်အိမ်ပေါ် လက်လှမ်းနေတဲ့ချိန် မခင်ကြည်က ကျုပ်နောက်ကနေ ပုဆိုးဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ကျုပ် လိုက်ဖမ်းပေမယ်မမှီတော့ဘူးလေ။
ဟာ...မမခင်ကြည် ဘာလုပ်တာလည်းဗျလို့ပြောလိုက်တော့ မခင်ကြည်က ကျုပ်လီးကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး သူ့ပါးစပ်လေးထဲထည့်ပြီး စုပ်ပါလေရော....။.
အားးးးးးးရှီးးးးးးမမခင်ကြည် ဘာလုပ်တာလည်းဗျ ကိုဖိုးခင်သိရင် မကောင်းဘူးလေဗျာ မလုပ်ပါနဲ့ မမရယ်..။
အသာနေပါ ငလင်းရယ် မမလေ မင်းဟာကြီးကို မြင်ပြီးမနေနိုင်လို့ပါ မမကိုသနားပါကွာ မင်းအကိုဖိုးခင် က မမကိုမလိုးပေးနိုင်တော့ဘူးအရက်ကျွန်ဖြစ်နေပြီ မမလေ တအားအလိုးခံချင်နေပြီ မခံရတာကြာပြီ မမ မင်းကို မုန့်ဘိုးပေးပါမယ်ကွာ မမကိုချစ်ပေးပါနော်....နော် မောင်လေး.....။
ကျုပ်လည်းစဉ်းစားရပြီလေ တစ်ခါမှလည်းမလိုးဖူး တာရယ် လိုးကြည့်ချင်တာရယ် ပိုက်ဆံလည်းလိုတာရယ် ရယ်ကြောင့် စာတွေ့နဲ့ အကြီးတွေပြောတာပဲကြားဖူးတဲ့ လိုးတယ်ဆိုတာကြီးကို အခွင့်ရတုန်း လုပ်မယ်ဆိုပြီး....။
ဒါဆိုလည်း မမရယ် ဘယ်သူမှတော့မပြောနဲ့ဗျာ ကျုပ်ကိုပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးမှာတုန်း.....။
ဟဲ့ ဒါမျိုးကပြောစရာလားဟဲ့ နင့်ကိုငါ ငါးထောင်ပေး မယ်ဟာ ငါ့ကိုသာချစ်ပေး...ငါကြိုက်ရင်နောက်လည်း တစ်ခါငါးထောင်နှုန်းနဲ့ နင့်ကိုလိုးခိုင်းမယ်...။
အင်းးးဒါဆိုလည်းပြီးရော ကျုပ်ကိုတကယ်ပေးရမှာ နော်...... ။
အဲလိုပြောပြီး မမခင်ကြည်က ကျုပ်လီးကိုဆက်စုပ်ပေး တယ်ဗျာ။ ကိုပ်မှာကောင်းလိုက်တာ….။ ကျုပ်လည်း သူ့ စောက်ဖုတ်ထဲ လိုးမယ်လုပ်တော့ သူက….။
ဟေ့…..ဟေ့ ဒီလိုတော့မရဘူးလေ မမကိုလည်းပြန်လုပ်ပေးလေ….။
လာ…မမ ပက်လက်လှန်ပေးမယ် မမရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို လျက်ပေး…။
ကျုပ်လည်း မလျက်တက်ဘဲနဲ့ သူပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်ပြီးလျက်ပေးတယ်လေ….။
လျက်ပေးရင်းခဏကြာတော့ သူကရပ်ခိုင်းပြီး ပေါင်ကိုကားပေးတယ် ကျုပ်လီးကိုလက်နဲ့ဆွဲပြီး သူ့စောက်ဖုတ်ဝမှာ တေ့ပေးတယ်လေ။ ပြီးတာနဲ့ ကျုပ်ကိုဖြေးဖြေး ချင်းပဲလိုးခိုင်းတယ်။ ကျုပ်လည်းသူပြောတဲ့အတိုင်း လိုးပေးတါပေါ့။ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတာပဲလေ။ ဒါပေမယ် ဆက်လိုးခိုင်းလို့နောက်တစ်ကြိမ်ဆက်လိုးပေးရသေးတယ်။ ကျုပ်လည်းမခင်ကြည်နဲ့ အကြိမ်များစွာ လိုးပြီးနောက်ပိုင်း လိုးတဲ့နေရာမှာဆရာတစ်ဆူဖြစ်လာတယ်လေ…။
မခင်ကြည်နဲ့လိုးရတာ အားမရတော့နောက်ထပ်သား ကောင်ထပ်ရှာတယ် ကျုပ်လိုးရင် လွယ်မဲ့သူကိုပေါ့။ အဲ ဒီမှာပဲ ဒေါ်ခင်ချိုသက်နဲ့ တွေ့ပါလေရော….။ သူကကျုပ်ကိုအထာပေးတယ်…။ ဒါပေမယ်သူကမခင်ကြည်လိုမရဲ ဘူး။ ဒီတော့ ကျုပ်မှာကြံရတော့တာပေါ့….။
တသ်နေ့တော့ သူကကျုပ်ကိုထင်းခွဲခိုင်းတယ်ဗျ။ သူယောကျာ်းကိုဝေလင်းကလည်း တောထဲသွားတာကိုး။ သူတောထဲသွားရင်အနဲဆုံးနှစ်ရက်တော့ကြာတယ်ဗျ။ ထား ပါကျုပ်ကိုထင်းခွဲခိုင်းတော့ ကျုပ်လည်းထင်းခွဲပေးတါ ပေါ့။ ချေးသံရွဲရွဲနဲ့ ထင်းခွဲပြီးတော့ သူက ကျုပ်ကိုထမင်း ခူခပ်ပေးတယ် သူအိုက်လို့ရေချိုးမယ်ဆိုပြီး နောက်ဖေး ရေကန်မှာရေချိုးနေတယ်လေ။ ကျုပ်နဲ့ဆိုရင်တန်နေတာ ပဲ မြင်နေရတယ်လေ။ ဖင်ကြီးလှုပ်လှုပ်နဲ့ရေချိးနေတာ။ ကျုပ်မှာ ထမင်းမစားနိုင်ဘဲ သူ့ကိုကြည့်ရင်းလီးက တောင်နေတော့ ပုဆိုးအောက်ကနေ လီးကိုဂွင်းထုနေရ တယ်။ သူလည်းရေချိုးပြီးတော့ ထဘီရင်လျားနဲ့ပဲ သူတို့အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားတယ် ကျုပ်လည်း ဖင်ကြီးကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်တယ် အကျီကတော့ ထင်းခွဲကတည်းကချွတ်ထားတာကိုး။ အဲဒီတော့ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ ကိုယ်လုံးတီးကြီး နဲ့ သူဝင်သွားတဲ့အိပ်ခန်းထဲလိုက်ဝင်တယ်လေ။ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်တော့ မချောက ထဘီချွတ်ပြီးကိုယ်လုံးတီးကြီး နဲ့ထဘီဝတ်ဖို့ရွေးနေတုန်းရှိသေးတယ်။ ကျုပ်လီးအ တောင်သားနဲ့ ဝင်လာတာမြင်တော့….။
ဟင်….ကိုလင်း နင်ဘာလုပ်မလို့တုန်း ထွက်သွား ငါ့ အခန်းထဲကနေ….။ ငါအော်မှာနော်…..။
အော်လေ……ခင်ဗျားကျုပ်ရှေ့မှာအနေထိုင်မှ မဆင်ချင်တာ….လူပျိုလေးရှေ့ကို ထဘီရင်လျားနဲ့နေတယ် ပြီးတော့ဖင်ကြီးလှုပ်ပြီး လမ်းလျောက်တော့ ကျုပ်မှာလီး တောင်တာ ဘောတွေအောင့်လှပြီ…ဒီနေ့တော့ ခင်ဗျား ကိုလိုးမှအဆင်ပြေမယ် လာခဲ့…..။
ကျုပ်လည်းသူ့ကိုပွေ့ဖက်ပြီး သူတို့လင်မယားအိပ် တဲ့ ခုတင်ပေါ်ကို ထပ်လျက် လှဲချလိုက်တယ် ကစ်ဆင်တွေဆွဲတော့ သူကရုန်းတယ်….ကျုပ်လည်းသူရုန်းနေတဲ့ ကြားထဲကကိုသူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုရအောင်စုပ်…ပြီးတော့ နို့ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်တာလေ။ သူလည်းရုန်းမရ မှန်းသိ တော့ညိမ်သွားတယ်…။ ကျုပ်လည်းသူညိမ်တော့ နောက် တစ်ဆင့်ထပ်တက်တာပေါ့…။ သူ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကိုရှယ်ဂျာပေးတါ….ကော့ပြန်နေတာပဲ သူ့မှာ…။ ကျုပ်လည်းသူ့စောက်ဖုတ်က အရည်တွေထွက် ပြီးတစ်ချီပြီးအောင်ကိုဂျာပေးလိုက်တာ။ သူတဟ်ချီပြီး တော့ ကျုပ်လည်းသူ့ခေါင်းကိုဆွဲပြီး လီးကိုသူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်တယ် ပြီးတော့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ ပါးစပ်ထဲ ကိုလိုးနေမိတယ်။
ကျုပ်အရှိန်တက်လာတော့ သူ့ကိုလေးဘက်ကုန်းခိုင်း ပြီးနောက်ကနေ ပြူးထွက်လာတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲ လီးကိုဖြေးဖြေးချင်းလေး လိုးထည့်လိုက်တယ် လေ….အရည်တွေထွက်ထားတာဆိုတော့ ရှောရှောရှုရှုပါပဲလီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်သွားတာ။ ကျုပ်လည်းအားရပါးရဆောင့်လိုက် ပြီးခါနီးတော့အာရုံလွှဲပြီးဖြေးဖြေးချင်းဆောင့်လိုက်နဲ့ နှစ်ယောက်လုံးအရသာတွေ့ အောငလိုးနေလိုက်တယ်။ တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ သူလည်းနှစ်ချီပြီးနေတော့ ကျုပ်လည်းစိတ်လျော့ပြီး အားရပါးရဆောင့်လိုးလိုက်တာ ပြီးဆုံးခြင်းပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားတယ်လေ…..။
ပြီးလည်းပြီးရော…..ကဲ…ဘယ်လိုလည်းမခင်ချိုသက်….ကျုပ်က ဆက်လိုးပေးရမှာလား ပြန်ရတော့မှာ လားမေးတော့…..။
ဘာ…..ပြန်မှာတုန်း..သူများကိုလိုးတုန်းကလိုးပြီး တော့…ဒီမှာကောင်းတုန်းရှိသေး ဆက်လိုးပေးဦး…။
အမယောကျာ်းနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်သူပိုကောင်း လည်းလိုးတာ….။
မင်းကပိုကောင်းတာပေါ့…..ဟိုငနာက…သူပြီးရင် ဖုတ်ဖက်ခါပြီး ပြီးသွားတာ..ငါ့မှာဆန့်တငင်ငင်နဲ့လေ…။
ကဲပါ…ကျွန်တော်မျိုးမကြီးပေးပါမယ်နော် ထပ်လိုး ပေးပါ…လိုးပါတော့….။
ကိုပ်လည်းအဲဒီနေ့က တစ်နေ့ကုန်လိုးရတာ ညနေစောင်းမှပြန်ရတယ်။ မပြန်လို့လည်းမဖြစ်ဖူးလေ အိမ်မှာညီမလေးက ထမင်းစားဖ်ု့စောင့်နေပြီ…အဲဒါနဲ့ ကျုပ်လည်းမခင်ချိုသက်ကို နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်…။ နောက်နေ့တွေလည်းသူယောကျာ်းလစ်ရင် ခေါ်မယ်လာလိုးပေးဦးတဲ့။
ကျုပ်လည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လူလည်းနုန်းချိနေပြီလေ။ အမောတော့ပြေပါတယ် ညီမလေးက ထမင်းဟင်းတွေခူးခပ်ပြီးစောင့်နေတာ။ ထမင်းစားပြီးတော့ ညီမလေးက ကိုကိုတဲ့ ညီမလေးနင်း ပေးမယ်တဲ့…။ ကျုပ်ကလည်း အေးကောင်းတာပေါ့ ကိုကိုလည်းညောင်းကိုက်နေတာအတော်ပဲ လာနင်းလှည့်..။
ကျုပ်လည်းပက်လက်လှန်ပေးလိုက်တယ်…..။ ညီမလေးက ခြေထောက်တွေကိုစပြီးနင်းပေးတါပေါ့။ ကျုပ်လည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ဇိမ်ယူရင်း မခင်ကြည်ရယ် မခင်ချိုသက်ရယ်ကိုလိုးတဲ့ပုံရိပ်တွေမြင်လာတော့ အောက်ကလီးက တောင်လာတယ် ကျုပ်လည်းအမြန်ပေါင်ကြားထဲ ညှပ်ထားလိုက်ရတယ် ညီမလေးမြင်သွားလားမသိပါဘူး။ မမြင်လောက်ပါဘူးလို့စိတ်ကဖြေသိမ့်ရင်း ညီမလေး ကိုကြည့်လိုက်တယ် သူကဟိုဘက်လှည့်ရင်းနင်းနေတာ….။ သေချာကြည့်မိတော့မှ တဏှာစိတ်လေးဖြစ်လာ တယ်။ ကြည့်လေ ပေါင်ကိုနင်းနေတာ…။ စကပ်က ဒူးအထက်နားမှာ ရှပ်အကျီဝတ်ပြီးဘော်လီဝတ်မထားတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေတောင် တခါတခါမြင်ရတယ်။ ကျုပ်လည်းအဲမြင်ကွင်းကြည့်ပြီး လီးကတော်တော်လေး ကိုတောင်လာတာ ဘောတောင့်အောင့်တယ်…။ ကျုပ်လည်းအကြံနဲ့ ညီမလေးကိုပေါင်ရင်းနင်းခိုင်းတယ် ပေါင်ကြားညှပ်ထားတဲ့လီးကို ထုတ်ချလိုက်တယ်…။ ထုတ်ချလိုက်တော့ လီးကတော်တော်ရှည်တာဆိုတော့ သေချာတာတစ်ခုက ညီမလေးမှာ ပေါင်ရင်းနင်းရင်းနင်းရင်း ကိုပ်လီကြီးပေါ်ကို တစ်ခါတစ်ခါနင်းမိတယ် အပျိုမလေး လည်းဖိန်းရှိန်းရှိန်းနေမှာပေါ့။ ကျုပ်လည်းပေါင်နင်းခိုင်း တာရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး လက်မောင်းရင်းကိုနင်းခိုင်းတယ်။ သူလက်မောင်းရင်းကိုလာနင်းတော့ စကပ်က ကိုပ်မျက် နှာပေါ်မှာလေ တစ်ချက်နင်းလိုက်တိုင်း စကပ်က မျက်နှာ ပေါ်ဝေ့ဝေ့လါတယ်။ အောက်ကစောက်ဖုတ်လေးကလှပ်ခနဲ့ လှပ်ခနဲပဲ မြင်လိုက်ရတာ။ အောက်ခံဘောင်းဘီလည်း ဝတ်မထားဘူး။ ကျုပ်လည်းဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ပုဆိုးကိုအောက်ကန်ချလိုက်တယ် လီးကမိုးပေါ်ထောင်နေတာပဲ…..။ ပုဆိုးမရှိတော့ ညီမလေးကို ကျုပ်လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကို ခွနင်းခိုင်းတယ်။ သူစပြီး ခွနင်းတော့ စောက်ဖုတ်လေးက ကျုပ်မျက်နှာတည့်တည့် မှာလေ။ ကျုပ်လည်းစောက်ဖုတ်လေးကိုကြည့်ရင်းကြည့် ရင်း လိုးချင်စိတ်ကမထိန်းနိုင်တော့ဘူး။
ညီမလေးအဲပုံစံအတိုင်း ကိုကိုမျက်နှာပေါ်ထိုင်ပေး စမ်းကွာ….။
ဘာလုပ်မို့လည်းကိုကို…ညီမလေး ငရဲကြီးမှာပေါ့ ကိုကုမျက်နှာပေါ်ကြီးလေ….။
မကြီးပါဘူးကွာ ကိုကိုကခွင့်ပြုထားတာပဲဟာကို….လာလာလာ ထိုင်တော့…..။
သူလည်းကျုပ်မျက်နှာပေါ်ထိုင်ချပေးတယ်လေ…ကျုပ်လည်း မျက်နှာတစ်ခုလုံးစကပ်ကြီး အုပ်လို့….😁😁😁စောက်ဖုတ်လေးက ကျုပ်ရှေ့တည့်တည့် မှာ ဒီ ၁၄ နှစ်သမီးလေးစောက်ဖုတ်က ကျုပ်လီးကြီးသွင်း ရင်ဝင်ပါ့မလားကျုပ်တွေးနေမိတယ်။ မဝင်တော့ မဝင်လောက်ဖူးပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ကျုပ်ရှေ့ကစောက်ဖုတ်လေးထဲ လျှာကြီးထိုးထည့်ပြီး ဂျာပေးတါပေါ့။ ဂျာပေးရင် ကောင်မလေးမှာ ထွန့်ထွန့်ကိုလူးလို့ ကောင်းနေရှာတာ။ အားးးးးအားးးးးအမလေး ကိုကိုရယ် အားးးးးးအမလေး..အားးးးးအားးးးကောင်းလိုက်တာ….နဲ့နေတာပဲ။ ကျုပ်တော်တော်လေးကြာမှ ဂျာပေးရင်း သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲကနေ အချစ်ရည်တွေစီးကျလာပါလေရော။ အဲဒီတော့မှ ကျုပ်က သူ့ကိုလီးစုပ်ခိုင်းတယ် သင်ပေးရတာ ပေါ့ စုပ်တတ်အောင်။ သူစုပ်ရင်းစုပ်ရင်း ကျုပ်လည်းပြီး သွားတော့ သူ့စောက်ဖုတ်လေးထဲ လီးထည့်ဖို့လုပ်တာပေါ့။ သူကမောင်နှမချင်း မသင့်ဘူးပြောပေမယ် ကျုပ် ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးညီမလေးရယ် ဗိုက်မထွက်အောင် ကိုကိုလိုးမှာပါဆိုတော့…ကိုကို့သဘောပါတဲ့။ ကျုပ်လည်း အရည်တွေရွဲနေတဲ့စောက်ဖုတ်ဝလေးကို လီးထည့်ကြည့် တော့ ဒစ်ပဲထည့်လို့ရတယ်လေ ကျုပ်လည်းဆက်သွင်း ကြည့်တယ် ညီမလေးမှာ မခံနိုင်တာနဲ့ ဒစ်မြုပ်ရုံပဲလိုးရတယ်….။ အဲဒီလိုနဲ့ နေ့တိုင်းနေလာတာ မနက်ပိုင်းဆိုရင် ရွာထဲကမိန်းမတွေသွားလိုး ညပိုင်းဆိုရင် ညီမလေးစောက်ဖုတ်ကိုဂျာပေး သူကကိုယ့်လီးစုပ်ပေး စောက်ဖုတ် လေးထဲဒစ်ကလေးမြုပ်ရုံလိုးပေးရင်းနဲ့ ညီမလေးဆယ်တန်းအောင်လို့မြို့ကျောင်းကိုသွားတက်ပြီလေ။ ကျုပ်လည်းရွာမှာ ဆာနေတဲ့မိန်းမတွေကိုသွားလိုးပေးလိုက်… ပိုက်ဆံရှာပြီး ညီမလေးဆီပို့လိုက်နဲ့ သူမျက်နှာမငယ် အောင်ထားပေးပါတယ်…။ အဲချိန်မှာပဲ ကျုပ်အချစ်ကို တွေ့တယ်။ သူကမေနှင်းတဲ့ ရွာမျက်နှာဖုံးရဲ့သမီးပေါ့။ ကျုပ်သူ့ကို လိုက်တုန်းကဆိုတော်တော်ခက်တာ။ နည်းမျိုးစုံနဲ့လိုက်တယ် မရဘူး။ နောက်ဆုံး သူ့ဘေးနားက သူ့သူငယ်ချင်းမလေး ဖူးဖူးကိုကပ်ပြီးတော့မှအကူညီတောင်းတယ်။ ကိုယ်က မေနှင်းဆီကိုစာပေး ဖူးဖူးက စာကိုယူသွားပေးတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ခုသောမနက်ခင်းမှာ ဖူးဖူးနဲ့တွေ့တော့…..ဟဲ့ကိုလင်းတဲ့….။
ညနေကြရင် ရွာပြင်တောစပ်နားကစောင့်နေ မေနှင်း ကနင့်ကိုပြန်စာပေးလိမ့်မယ်တဲ့…..ဒါပေမယ့် နင်ဒီအတိုင်း တော့မရဘူးနော်…ဟင်းးဟင်းးး။.
အေးပါ နင်ကြိုက်တာပြော ငါလုပ်ပေးမယ်….။
ကျုပ်လည်း ရင်ခုန်ရင်းစောင့်နေတာတစ်နေကုန် ဘာအလုပ်မှလည်းမလုပ်နိုင် ရွာထဲကဟာမကြီးတွေကိုလည်း သွားမလိုးနိုင်နဲ့ ကြာလိုက်တာ ဒီနေ့ကအကြာဆုံးလို့တောင်ထင်မိတယ်လေ….။
ညနေခင်းရောက်တော့ ရေမိုးချိုးပြီး တောစပ်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်…တော်တော်နဲ့ပေါ်မလားဘူး မိဖူးဖူးက ဟောဗျာ ပြောရင်းဆိုရင်းလာပါပြီ…။ ခုမှသေချာကြည့် မိတယ် ဖူးဖူးလည်းတစ်မျိုးလှတာပဲ မြန်မာဆန်ဆန်အ ဝတ်အစားလေးနဲ့…။ ကျုပ်နားရောက်တော့ သူ့လက်ထဲ ကစာလေးကျုပ်ကိုပေးတယ်…။
ကိုလင်း….မြန်မြန်ဖတ်စမ်းပါဟာ ငါလည်းရင်ခုန် တယ်ဟ….။
မေနှင်းက ငါ့ကိုချစ်တယ်တဲ့ဟ…..ပျော်လိုက်တာ ကျုပ်လည်းစိတ်လွတ်ပြီး ဖူးဖူးကိုဖတ်ပျော်နေမိတယ်…။
ဟဲ့ ကိုလင်း နင်ပျော်တာလည်းပျော်ပေါ့ဟ ငါ့ကိုလွှတ်ဦးးးးမသာလေး….။
ကဲ…အဖြေလည်းရပြီဆိုတော့ နင့်ကတိအတိုင်းပဲ နော်…..။
ကျုပ်လည်း ပျော်ပြီးသူ့ကိုဖက်လိုက်တယ်… မရဘူး ဟာခုပြောခုပြော….ဆိုပြီးသူ့ကိုဖက်ရင်း ရမ်းလိုက်တာ နှစ်ယောက်သား အရှိန်လွန်ပြီး ဖူးဖူးကအောက်က ကျုပ်ကအပေါ်က လဲကျသွားတယ်။ ရိုးရိုးလဲရင်ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဖူးဖူးထဘီကလန်ပြီး ကျုပ်ပုဆိုးကခြေထောက်အောက် ရောက်သွားတယ်လေ။ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ကျုပ် ကအောက်ခံမဝတ်တတ်တော့ ကျုပ်လီးကြီးက ဖူးဖူး အောက်ခံဘောင်းဘီအပေါ်သွားထောက်မိတယ်။ လီးကလည်းချက်ခြင်းတောင်လာတာ။ အောက်ခံသာမရှိရင် စောက်ဖုတ်နဲ့လီးနဲ့ကမိတ်ဆက်နေပြီ….။ ကျုပ်တို့နှစ် ယောက်သားခဏတော့ကြောင်သွားတယ်။ စပြီးသတိဝင် တာကဖူးဖူးလေ။ သူကရုန်းထွက်မယ်လုပ်တော့ ကျုပ်က အလွတ်မပေးလဲ ချုပ်ထားပြီး ကသ်ဆင်ဆွဲတော့တာပဲ။ ကစ်ဆင်ဆွဲရင်း အကျီအောက်ကနို့တွေကို ဆုတ်နယ်ပေး တာ။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း အောက်ခံဘောင်းဘီအောက်ကစောက်ဖုတ်ထဲနှိုက်နေတာ။ ဖူးဖူးကမလုပ်ဖို့တားပေမယ် အားမပါဘူးတားတဲ့ပုံက။ ကျုပ်လည်း အောက်ခံကိုဆွဲချွတ်ပြီး သောက်ဖုတ်ကြီးထဲလျှာထိုး ထည့်ပြီး ဂျာတော့တာပဲ။ ဂျာပြီးတော့ စောက်ဖုတ်ဝ လီးတေ့ပြီး လိုးတော့တာပဲ။ အဲနေ့ကဖူးဖူးကိုလိုးတော့ ဖူးဖူးလည်း ကျုပ်ကိုစွဲသွားတယ်။ နောက်တစ်ပါတ်လောက် ကြာတော့ မေနှင်းကိုအပြင်ဘက်ခေါ်ထုတ်ပေးတယ်။ တောထဲမှာပဲ ဖူးဖူးကကင်းစောင့်ပေးတယ်။ အဲနေ့မှာပဲ မေနှင်းရဲ့ပန်းဦးလေးကိုခက်ခက်ခဲခဲချွေလိုက်တယ်လေ။ အဲနောက်ပိုင်းတော့ မေနှင်းနဲ့လစ်ရင်လစ်သလို လိုးဆော် လိုက် မေနှင်းလစ်ရင် ဖူးဖူးကိုခေါ်လိုးလိုက် ရွာထဲကဟာ မကြီးတွေကို လိုးလိုက်နဲ့အဆင်ပြေနေလေရဲ့။
အဲလိုနေလာရင်းနေလာရင်းနဲ့ ညီမလေးနောက်ဆုံး နှစ်ကိုရောက်တော့ ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်စရာကြုံလာတယ် လေ။ ရွာကိုပြောင်းလာတဲ့ ဘခက်ဆိုတဲ့သူဌေးသားက မေနှင်းကိုမျက်စေ့ကျနေတယ်ဆိုတာ ကျုပ်သိလိုက် ရ တယ်လေ။ ကျုပ်ကဆင်းရဲသား ဟိုကောင်က သူဌေးသား ဘဝတွေက ကွာခြားပါတယ်။ ကျုပ်နဲ့မေနှင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်း အတ်ကြောင်းထပ်လာတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မေနှင်းကဘခက်ဆိုတဲ့ သူဌေးသား နဲ့ပဲယူလိုက်တယ်။ ကျုပ်မှာတော့ စားလည်းဒီစိတ်သွားလည်းဒီစိတ်နဲ့ ယစ်ထုတ်ကြီးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာတယ် လေ…
မေရယ်..မေရယ်ကျော်တော့လှေသူကြီးပါကွယ် ညားတော့လည်းလှေထိုးသားနဲ့ရယ်..ဂုဏ်ငွေကို သူခင်တွယ် အဆောင်ယောင်ကိုသူမင်တယ်…..
အဲသီချင်းလေးကြားတိုင်း ကျုပ်မှာ ပိုခံစားရတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ညီမလေးကျောင်းပြီးလို့ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ကိုရောက်လာတယ်….။
ကျုပ်ကိုတွေ့တော့ ငိုပါလေရောဗျာ….။ ကြည့်လေ ဆံပင်ကရှည်ကြီး ညှင်းသိုးသိုးနဲ့ တကယ့်ကို သူရူးတစ် ယောက်ပုံဖြစ်နေတာကိုး။.
သူလည်းဖူးဖူးဆီမေးတော့ အကြောင်းစုံသိသွားတယ် ကျုပ်ကိုအားပေးတယ် သူရှေ့ရေးကိုမကြည့်ပေး တော့ဘူးလားဘာလားပေါ့။
အဲဒီတော့မှကျုပ်လည်း အမြင်မှန်ရလာတာပေါ့ ဟုတ်တယ်လေ ကျုပ်ချစ်တဲ့ညီမလေးရှေ့ရေးကရှိ သေးတာကိုး ညီမလေးကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူး အပျိုကြီး ဖားဖားတောင်ဖြစ်နေပြီလေ။ ရွှေမှုံရတီလိုပံ စံ မျိုးပဲညီမလေးက။ ညီမလေးက ကျုပ်ကိုဖူးဖူးနဲ့သဘော တူတယ် သူကဖူးဖူးကိုသဘောကျနေတာ။ ကျုပ်လည်း ဖူးဖူးကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ် ဖူးဖူး ရှေ့မှာပဲ ဖူးဖူးခမျာ့ရှက်သွေးလေးဖျာလို့။ ကျုပ်လည်း အလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်တယ်။ အဆင်ပြေလာတာပေါ့။ တစ်ရက်ကျုပ်အလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီး ထွက်လာတယ်လယ်ထဲကိုပေါ့။ ဒါပေမယ့် နေသိပ်မကောင်းချင်တာနဲ့ မထူးပါဘူး တစ်ရက်တော့နားမယ်ဆိုပြီး လှည့်ပြန်လာခဲ့ တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ထင်မှတ်မထားတဲ့ မြင်ကွင်း ကဆီးကြိုနေတယ်။ ရွာထဲက စမ်းကိုဆိုတဲ့ချာတိတ်က ညီမလေးရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုလျက်နေလေရဲ့။ ကျုပ်လည်း မမြင်ကွယ်ရာမှာ ကပ်ပြီးသူတို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်တယ်။ ကောင်လေးကမိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ။ ကျုပ်ဆက် ခေိါင်းကြည့်လိုက်တော့ ကောင်လေးကစောက်ဖုတ် လျက်နေတာကိုရပ်ပြီး လီးကိုညီမလေးကိုစုပ်ခိုင်းတယ် တော်တော်လေးကြာတော့ လီးစုပ်တာရပ်ပြီး ညီမလေး စောက်ဖုတ်ထဲကို လိုးထည့်လိုက်တယ်။ ကြည့်ရတာ တစ်ကြိမ်မကတော့ဘူးနေမှာသူတို့တွေ။ ကောင်လေးက ဆောင့်ဆောင့်လိုးတာ ဖက်…ဖက်….ဖက်…..ဖက် နဲ့နေတာပဲ။ သိပ်မကြာပါဘူး ကောင်လေးပြီးသွားတယ်။ ညီမလေး ကကောင်လေးကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကိုကို့အတွက်ထမင်းပို့ဖို့ချက်ရဦးမယ်တဲ့။ ကောင်လေးကပြန်ချင်ပုံမရပါ ဘူးဒါပေမယ့် ညီမလေးကိုချစ်ပုံရတော့ စကားနားထောင်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်။ ကျုပ်လည်းလယ်ထဲသွားတဲ့ ပစ္စည်း တွေကောက်ချိန်မရဘဲ မြန်မြန်ဆင်းပုန်းလိုက်ရတယ်။
ကောင်လေးနဲ့ညီမလေးအိမ်ပြင်ရောက်တော့ ကောင်လေးကနှုတ်ဆက်အနမ်းပေးပြီးထွက်သွားတယ်။ ညီမလေးက အိမ်ထဲပန်ဝင်ဖို့အလှည့်မှာ ကျုပ်မေ့နေတဲ့ လယ်ထဲသွားမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တော့ မျက်နှာပျက် ပြီးဘေးဘီလိုက်ကြည့်နေတယ်။ ကောငလေးကဝေးဝေး ရောက်သွားပါပြီ။ အဲဒီတော့မှ ကျုပ်ထွက်လာတယ် ညီမလေးကကျုပ်ကိုတွေ့တော့ အပြစ်ရှိသူလိုခေါင်းလေးငုံ့ သွားတယ်။ ကျုပ်လည်းသူ့ခေါင်းလေးကို ကြင်နာစွာကိုင် ပြီး သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး အိမ်ထဲခေါ်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ထဲ ရောက်တော့…..။
ဝမ်းသာပြီးကျုပ်ကိုဖက်ထားတယ်…ကျုပ်လည်းသူ့ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြန်ဖက်ထားမိတယ်….။ ခဏကြာတော့….ကျုပ်က…ညီမလေးရေ….
စောနက ကောင်လေးညီမလေးကိုလိုးတာ ညီမလေး အားမရဘူးမို့လား….
ဒါဆို…ငယ်ငယ်ကလို ကိုကိုညီမလေးကိုလိုးပေး မယ်နော် ခုတော့လီးတစ်ချောင်းလုံးဝင်လောက်ပါပြီ..ညီမလေးလက်မထပ်ခင် ကိုကို ညီမလေးကိုငယ်ငယ် ကလိုလိုးမယ်နော်….။
ညီမလေးတစ်ချက်တော့တွေသွားတယ် ဒါပေမယ့် ချက်ခြင်းပဲ….အင်းးးက်ိုကို….ကိုကို့သဘောပါတဲ့…။.
ကျုပ်လည်းညီမလေးကို ကျုပ်အိပ်တဲ့ခုတင်ပေါ် ခေါ်လာခဲ့တယ် ပြီးတော့ညီမလေးကိုနမ်းတယ် သူကလည်း ပြန်နမ်းတယ် နမ်းရင်းနမ်းရင် ကာမစိတ်တွေတက်လာတော့ နှသ်ယောက်လုံးကိုယ်တုံးလုံးချွတ်လိုက်တယ်… ကိုပ်က ညီမလေးစောက်ဖုတ်ကို ဂျာပေး သူက ကျုပ်လီးကိုစုပ်ပေးနဲ့….69 ပုံစံလေးလုပ်ကြတယ်။ ခဏကြာတော့ ညီမလေးပေါင်နှလုံးကြားထဲလက်ထောက်ပြီး စောက် ရည်ရွဲနေတဲ့ ညီမလေးစောက်ဖုတ်ဝကိုလီးတေ့ပြီး အားရပါးရဆောင့်ချလိုက်တာ……
ဗြစ်တစ်တစ်…..ဗြိ…အားးးးးကိုကို…အားးးးအမလေးးးးးးနာလိုက်တာကိုကိုရယ် ညီမလေးစောက်ဖုတ်ကွဲ သွားပြီလားမသိဘူး ဖြေးဖြေးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကို ကလည်း….ကျုပ်လည်းမညှာတော့ဘူး ဆက်တိုက် ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးတော့တာပဲ….​ဗြစ်….ဗြစ်…ဗြိ…ဗြိ ဖက်…ဖက်…ဖက်…အားးးးးလိုးလိုက်တိုင်းအသံတွေဆူ နေတာပဲလေ။ ကျုပ်လည်းအဲဒီနေ့တစ်နေ့လုံး ညီမလေးကို လိုးဆော်နေတာ ညစာတောင်မစားဘူး ဖင်ကိုလိုးလိုက် စောက်ဖုတ်ကိုလိုးလိုက်နဲ့….။ လင်းခါနီးမှရပ်တော့တယ်။ မနက်အလုပ်ဆင်းရမှာကိုး။
ကျုပ်တို့တွေအိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်းလိုးတာပဲ….ထပ်ပြီးလိုးရင်းလိုးရင်းနဲ့ အချိန်တွေကြာလာတယ်။ ကျုပ်ကိုအရင်မဂ်လာဆောင်ခိုင်းတယ် ဖူးဖူးနဲ့ သူကနောက်မှဆောင်မယ်ပေါ့။ အကိုကိုဦးစားပေးတါလေ။ ကျုပ်နဲ့ဖူးဖူးမဂ်လာဆောင်တော့ မေနှင်းတို့လင်မယား လည်းလာတယ်လေ…..။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း မချိပြုံးလေး တွေနဲ့ပေါ့ဗျာ…..။